Wasiir Maaliyadeed oo isu daldaley dhaqaale xumada uu sababay caabuqa corona | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Wasiir Maaliyadeed oo isu daldaley dhaqaale xumada uu sababay caabuqa corona
Wasiir Maaliyadeed oo isu daldaley dhaqaale xumada uu sababay caabuqa corona
(Frankfurt) 29 Maarso 2020 – Wasiirka Maaliyadda Maamul-goboleedka Jarmanka ah ee Hesse oo ay hoos tagto Frankfurt, oo ah caasimadda dhaqaalaha Jarmanka, ayaa maydkiisa la helay.
Maamulka ayaa sheegay inay u muuqato inuu Wasiirku is diley, iyadoo uu Barasaabka gobolku sheegay inuu dareemayey inuu Wasiirku quus ka joogey burburka dhaqaale ee uu keenay caabuqa corona.
Maydka Thomas Schaefer, oo 54-jir ahaa xubinna ka ahaa xisbiga talada haya ee ay hoggaamiso Angela Merkel ee Christian Democratic Union, ayaa maanta laga helay birta xadiidka ah ee tareennada magaalada Hochheim, oo u dhow Frankfurt.
Booliiska iyo dembi baarayaasha oo dad goobjoog ahaa waraystay ayaa gaarey qiyaas ah inuu Schaefer iskii isu diley, welise rasmi ma aha.
Barasaabka maamul-goboleedka, Volker Bouffier, ayaa sheegay in ay u badan tahay inuu Wasiirku xamili waayey xasaradda dhaqaale ee caabuqa corona oo aad u dhaawacay dhaqaalaha caalamka.
Previous articleHANDARAABKA AMISOM: Xerada Xalane oo dhaqdhaqaaqeeda la hakiyey
Next articleMadax wax ku noqotay weerar is miidaamin ah oo ka dhacay Garoowe (Magacyada)